रानीपोखरी जोगाउने जाँगरिलाहरू - HNB News
रानीपोखरी जोगाउने जाँगरिलाहरू
रानीपोखरी हरियो पालले बारिएको थियो।
शैलेश शाक्यले पालको प्वालबाट चियाए।
पोखरीभित्रको मल्लकालीन बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सिमेन्टको पिलर ठड्याइँदै थियो।
पोखरीको पानी सुकाएर छिपेछिपे हिलो मात्र बाँकी थियो। ठाउँ–ठाउँमा पिँधसम्म सुख्खै। त्यही पिँधको कालो माटोधरि खोस्रन तम्तयार डोजर देखेर शैलेशले आफूलाई थाम्नै सकेनन्।
महानगरपालिका गए, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी रुद्रसिंह तामाङलाई भेटे।
‘उहाँले न विस्तृत डिजाइन देखाउनुभयो, न त यसरी बन्दैछ भनेर चित्त बुझाइदिनुभयो,’ रानीपोखरी पुनर्निर्माण क्रममा डेढ वर्षअघिको घटना सम्झँदै शैलेशले भने, ‘मलाई त्यही बेला शंका लाग्यो, रानीपोखरी ठेक्कामा दिएर भताभुंग पार्ने काम त हुँदै छैन?’
उनी भोलिपल्टै गए। पालभित्र छिरे। कामदारसँग कुराकानी गरे। ठेक्काको पनि उपठेक्कामा काम हुँदै रहेछ। उतिबेला सुर्खीचुना हालेर बनेको मन्दिरमा सिमेन्ट, छड प्रयोग हुँदै गरेको देखे। पोखरीको डिल कंक्रिट पर्खालले बार्ने र पिँधमा टायल ओछ्याउने तम्तयारी पनि थाहा पाए।
शैलेश काठमाडौंका रैथाने हुन्। उमेर, ५२ वर्ष।
हिजोआज सामाखुसी बसे पनि न्यूरोड क्षेत्रमै हुर्केबढे। रानीपोखरीसँग भावनात्मक रूपले गाँसिएका छन्। भन्छन्, ‘म सम्पदाको ज्ञाता होइन, तर जसरी काम भइरहेको थियो, त्यो गलत हो भन्ने बुझ्न ज्ञाता हुनै पर्दैन। पोखरीको सामान्य ज्ञान भए पुग्छ।’
‘अरे बाबा, मन्दिर पो भत्किएको, केही हुँदै नभएको पोखरी सुकाएर के जात्रा गर्या? कालो माटो झिकेर कंक्रिटले टालेपछि पानी कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट जान्छ? पानी आउजाउ नै बन्द गरेपछि पोखरी, पोखरी कसरी भयो?’
उनले रानीपोखरीका तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरे।
तस्बिर हजारौंले सेयर गरे।
यो रानीपोखरी संरक्षण अभियानको पहिलो कडी हो।
यहीँनिर जोडिन आइपुगे, किलागलका आलोकसिद्धि तुलाधर।
उनी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानमा सक्रिय थिए। काष्ठमण्डप ठेकेदारलाई जिम्मा दिन हुन्न भन्ने उनीहरूको माग थियो। पुरातत्व विभागको निगरानीमा स्थानीयबाटै काम गराउन लागिपरेका थिए। यो अभियान जारी छ।
जब उनले फेसबुकमा रानीपोखरीभित्र ठडिँदै गरेका सिमेन्ट–पिलर, सुकेको पोखरी र डोजरले माटो खोस्रँदै गरेको देखे, तुरुन्तै शैलेशसँग सल्लाह गरे।
‘काष्ठमण्डप र रानीपोखरी दुई अलग संरचना भए पनि दुवै काठमाडौं सभ्यताका अंग हुन्,’ उनले भने, ‘काष्ठमण्डप पुरानै स्वरूपमा उभ्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो, रानीपोखरी पनि त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। यही सोचेर यताको अभियानमा मिसियौं।’
यहाँबाट दोस्रो कडी सुरु हुन्छ।
शैलेश र आलोकले रानीपोखरी बचाउ निम्ति फेसबुक अभियान सुरु गरे। कालो माटो झिके पोखरी कसरी विनाश हुन्छ भनी जानकारी दिए। पुरानो मन्दिर जीर्णोद्वार गरिनुपर्नेमा कसरी पिलर ठड्याइँदैछ भनी अवगत गराए।
फेसबुक अभियान चलायमान हुन थाल्यो। प्रतिक्रिया ओइरिए। टीकाटिप्पणी सुरु भयो।
यो यत्तिकैमा सीमित हुन्थ्यो सायद, एक जनाले भीडबाट एक कदम अघि बढ्ने हिम्मत नगरेका भए।
उनी हुन्, अपिल केसी।
आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङका विद्यार्थी अपिलले आफू ‘एक्लै भए पनि रानीपोखरी गएर विनाशलीला हेर्ने र मनन् गर्ने’ आसयको फेसबुक स्ट्याटस लेखे।
उनको ‘स्ट्याटस’ ले तेस्रो चरणको तरंग ल्यायो।
संरक्षणमा जुमुर्राएका सबै अपिलले भनेकै दिन रानीपोखरी जान तयार भए।
सामाजिक सञ्जालबाट गोलबद्ध युवाहरू त्यस दिन स्वस्फुर्त ढंगले रानीपोखरीमा भेला भएको आलोक सम्झन्छन्।
‘कसैले कर गरेका थिएनन्। कसैलाई खुसी पार्नु पनि थिएन। न हामी केही काम नभएका फुर्सदिला थियौं,’ उनले भने, ‘रानीपोखरीको मल्लकालीन स्वरूप मासेर आधुनिक रूपमा ढालिँदैछ भन्ने खबरले हामी जुर्मुराएका थियौं।’
‘अपिलले रानीपोखरीमा भेला हुने अपिल गर्नासाथ चुप लागेर बस्नै सकेनौं। कोही कोही त धिमे खलः लिएर बाजा बजाउँदै पुगेका थिए।’
सम्पदाविद् तथा इञ्जिनियरिङ प्राध्यापक सुदर्शन तिवारी पनि त्यसै दिन यो अभियानसँग जोडिएको आलोक बताउँछन्।
उनीहरू सबै गणेशमान सिंह पार्कमा भेला भए। ताला लगाइएको थियो। फोडे। सभा, जुलुस गर्ने कुनै योजना थिएन। त्यस निम्ति चाँजो पनि मिलाएका थिएनन्। दुई, चार, छ हुँदै बीसौं जना उभिएपछि सबैको जोश भरिएको आलोक सम्झन्छन्।
‘हामीले बागबजारको एउटा पसलमा फोन गरेर पाँच मिनेटमै साउन्ड सिस्टम व्यवस्था गर्यौं। साथीहरूले तुरुन्तका तुरुन्त प्लेकार्ड लेख्न थाले। नारा बनाउन थाले। रानीपोखरी सम्झँदा र उदेकलाग्दो विनाश देख्दा जसको मनमा जे आउँछ, त्यही केरकार पारेर प्लेकार्ड बनाएका थियौं। हेर्दाहेर्दै आधा घन्टा पनि लागेन, स्वस्फुर्त भेला भएका मान्छे व्यवस्थित दबाबमूलक समूहमा परिणत भए,’ आलोकले भने।
उनीहरूले प्लेकार्ड बोकेर संरक्षणको नारा लगाउँदै रानीपोखरी परिक्रमा गरे।
त्यो रानीपोखरी जोगाउन स्थानीय तर्फबाट उठेको पहिलो एकीकृत आवाज थियो।
सामाजिक सञ्जालमा बलेको झिल्कोले गोलबद्ध भएकाहरू नै अन्ततः रानीपोखरी संरक्षण अभियन्ता बने।
जसले आफ्नो सन्देशद्वारा सबैलाई रानीपोखरी आउन अपिल गरेका थिए, उनै अपिल भने त्यसयता ‘गुमनाम’ छन्। त्यो दिन र त्यसपछिका केही कार्यक्रममा भेटे पनि पछिल्लो समय सम्पर्क नभएको आलोक बताउँछन्।
‘यो डेढ वर्षमा रानीपोखरीलाई माया गर्ने र पुरानै स्वरूपमा देख्न चाहने धेरै साथीहरू मिसिनुभएको छ,’ उनले भने।
मोनालिसा महर्जन उनकै सम्पर्कबाट अभियानमा जोडिन आएकी हुन्।
पोर्चुगलबाट सम्पदा संरक्षणमा विद्यावारिधी गरेकी ३२ वर्षीया मोनालिसा प्रायः उतै बस्छिन्। यहाँ आएका बेला आफ्नो अध्ययन र रुचिको विषयमै उनको समय बित्छ।
एक वर्षदेखि रानीपोखरी अभियानमा लागेकी उनलाई हामीले सोधेका थियौं, ‘सम्पदा भनेको के हो?’
‘पहिचान हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी नेपालमा रहँदासम्म सधैं यिनै सम्पदा वरिपरि हुन्छौं। खासै वास्ता हुन्न। जब विदेश पुग्छौं, हाम्रो पहिचान नै यिनै सम्पदाले दिन्छ।’
‘तपाईं सरकारी कार्यालय जानुस्, मेयरकै कार्यालय जानुस्। दरबार स्क्वायर, काष्ठमण्डप वा रानीपोखरीकै तस्बिर भित्तामा सजाइएको होला। किन राखिए ती तस्बिर? किनकि, ती हाम्रा पहिचान हुन्। हामीलाई चिनाउने तिनैले हो। हामी विश्व सम्पदा सूचीमा परेका वा नपरेका प्राचीन सम्पदासँग आफ्नो परिचय जोड्न पाएकामा गर्व गर्छौं,’ उनले भनिन्।
‘समस्या के भने, जब यी सम्पदामा लगानी गर्ने बेला आउँछ, हामी खुम्चिन्छौं। सन् २०१० को तथ्यांक देखेको थिएँ, ०.०१ प्रतिशत बजेट पनि हामीले सम्पदा संरक्षणमा छुट्टयाएका छैनौं। जुन चिजले विश्वमै हाम्रो परिचय दिइरहेको छ, त्यसैलाई सम्हाल्न हाम्रो किन यति कञ्जुस्याइँ? त्यति थोरै लगानी गरेको सम्पदाबाट हामी शतप्रतिशत गौरवको अनुभूति लिइरहेका छौं। यो सरासर बेइमानी हो।’
रानीपोखरीलाई उनी त्यस्तै बेवास्ता गरिएको सम्पदा सूचीमा राख्छिन्।
बेवास्ताकै क्रम बढ्दै आज मास्ने अवस्थासम्म पुगेको मोनालिसाको भनाइ छ।
‘रानीपोखरीलाई कुन रूपमा संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामी काठमाडौंलाई कुन रूपमा चिनाउन चाहन्छौं भन्नेमा टिकेको छ। मन्दिरै मन्दिरको सहर हो भनेर चिनाउन चाहन्छौं कि क्याफे नै क्याफेको सहर हो भनेर चिनाउन चाहन्छौं? यसको जवाफ सोचौं, रानीपोखरीमा अलमलै हुँदैन,’ उनले भनिन्।
अलमलले रानीपोखरी मात्र होइन, प्राचीनकालदेखिको पोखरी सभ्यता र संस्कृति नै धरापमा पर्ने उनी बताउँछिन्।
‘कालो माटोले पोखरी बनाउने हाम्रो आफ्नै विधि छ। यसले पानी आवागमन गराउँछ। जमिनमा पानीको मात्रा कायम राख्छ। जलचरहरूले बासस्थान पाउँछन्। यस्तो परम्परागत विधि मासेर ढलान गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला त वाष्पीकरणले पोखरी सुक्छ। बर्खाबाहेक अरू बेला बाहिरबाट भर्नुपर्छ। महानगरले काठमाडौंबासीलाई अहिल्यै पानी दिन सकेको छैन, अब रानीपोखरी भर्न कहाँबाट ल्याओस्? यो कहाँसम्म व्यवहारिक कुरा हो,’ उनले भनिन्।
पाटनको पिम्बहाल र भक्तपुरको सिद्धपोखरी परम्परागत विधिबाटै अहिलेसम्म टिकेको उनले उदाहरण दिइन्।
भुइँचालो पुनर्निर्माण क्रममा पोखरीको संरचना नै उल्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ। ‘क्षति पुगेको मन्दिर हो, पोखरीमा त केही भएकै थिएन। सरसफाइ गरे पुग्थ्यो। केही नभएको ठाउँमा पानी सुकाएर, माछा झिकेर यत्रो बबन्डर मच्चाउनुपर्ने कारणै थिएन,’ उनले भनिन्।
‘महानगर रानीपोखरीलाई सिमेन्टको ट्यांकी बनाउने सूरमा छ। त्यही ट्यांकीमा पानी भरेर सम्पदा संरक्षणको नारा दिँदैछ। जुन रूपमा रानीपोखरी बन्दैछ, अब यसलाई सम्पदा भन्न मिल्दैन।’
मौलिक विधि नबुझेर विदेशी चलन देखासिकी गर्नाले नै सम्पदा मासिने क्रम बढेको मोनालिसाको ठहर छ।
‘बाहिरतिर नदी किनारमा पर्खाल बारिन्छ। मान्छे किनारमा बस्छन्, खान्छन्, पिउँछन्। हामीले त्यही देखेर आयौं र यहाँ त्यस्तै खोज्दैछौं। यो गलत सोचाइ हो। हाम्रा पोखरी त्यस्ता होइनन्। परम्परागत ज्ञान र पहिचान हुन्,’ उनले भनिन्।
सम्पदा संरक्षणबारे धाराप्रवाह बोल्न सक्ने मोनालिसा विषयगत ज्ञानले पनि अभियानमा लाग्न प्रेरित गरेको बताउँछिन्। सबै अभियन्ता उनीजस्ता भने छैनन्।
ती विभिन्न ठाउँका छन्। फरक–फरक पेसाका छन्। फरक उमेरका छन्। अधिकांश त सम्पदा वा पुरातत्वका सामान्य जानकार मात्र हुन्। जसलाई यत्ति थाहा छ– ३५० वर्षअघि राजा प्रताप मल्लले कान्छा छोराको मृत्युशोकमा विह्वल रानीको चित्त बुझाउन यो मन्दिर बनाएका हुन्।
‘यत्ति ज्ञान काफी छ हाम्रा लागि, रानीपोखरी अभियानमा सरिक हुन,’ १८ वर्षीया रुक्सना कपालीले भनिन्।
‘हरेक देशका आ–आफ्नै परम्परा, संस्कृति र सम्पदा हुन्छ। काठमाडौंलाई त झन् हामीले सधैं संस्कृति र सम्पदामा धनी भनेर बुझ्दै आयौं।
हामीले चिनेको रानीपोखरी त्यसैको एउटा हिस्सा हो। हामीलाई सानैदेखि किताबमा पढाइँदै आएको यो सम्पदामा स्विमिङ पुलजस्तो कंक्रिट पर्खाल लगाउन हुँदैन भनेर बुझ्न मैले दसथरिको कुरा थाहा पाइरहनु पर्दैन।’
कपाली ब्लु डायमन्ड सोसाइटीअन्तर्गत समलैंगिक अधिकारमा आवाज उठाउँछिन्। उनी फेसबुककै ‘सेभ नेपाः भ्याली’ समूहमा सरिक छिन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र विकास योजनाका नाममा भइरहेका विनाश र विस्थापनविरुद्ध यो समूहले आवाज उठाउँदै आएको छ। बुङ्मती, खोकनाजस्ता प्राचीन बस्ती विस्थापित हुने गरी ‘स्याटलाइट सहर’ बसाउने योजना त्यसैमध्ये एक हो।
‘रानीपोखरी जस्तो बनाइँदैछ, के त्यसले हाम्रो पहिचान बोक्छ? के त्यसलाई हामी ३५० वर्षअघि राजा प्रताप मल्लले बनाएको हो भनी गर्वसाथ भन्न सक्छौं?’ रुक्सनाले प्रश्न गरिन्।
संरक्षण अभियानसँग गाँसिएका अधिकांशले सोध्ने प्रश्न यस्तै हुन्।
डेढ वर्षअघिको त्यो दिनबाट आजसम्म आइपुग्दा पुनर्निर्माण तरिका ‘गलत’ भन्दै धेरैले कारण सोधेका छन्। सूचना बाँडेका छन्। काठमाडौं महानगर भने ती सबै बेवास्ता गरेर आफ्नै एकतर्फी ढंगमा अघि बढेको अभियन्ता बताउँछन्।
चागलका ३३ वर्षीय सुरज महर्जनलाई महानगरको यो ‘एकसुर’ मा अनियमितताको आशंका छ।
सुरज पनि ‘सेभ नेपाः भ्याली’ नामक फेसबुक समूहमा आबद्ध छन्। ‘काठमाडौं बाँच्नलायक सहर हुनुपर्यो, खुला सार्वजनिक स्थल हुनुपर्यो, प्राचीन स्वरूप नष्ट नगरिएका सम्पदा हुनुपर्यो, प्राचीन बस्ती हुनुपर्यो, जीवनशैली हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘नेपाल आउने पर्यटकले यहाँ अपेक्षा गर्ने यिनै हुन्। उनीहरू रानीपोखरीबीचको ‘वाटर फाउन्टेन’ हेर्न आउने होइनन्। कफी खान आउने होइनन्। जे चिजका लागि आउने हुन्, त्यो नै मासेपछि नेपालको पहिचान के रह्यो?’
एक पुस्ताबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने परम्परागत ज्ञान यस्तै मूर्खताले मासिँदै गएको उनी बताउँछन्।
‘रानीपोखरी मासिएपछि कालो माटोले पोखरी बनाउने विधि भोलिको पुस्ताले कसरी सिक्ने? यसले हामीलाई ज्ञानको खडेरीबाहेक केही दिँदैन,’ उनले भने, ‘के हामी आफ्नो समृद्ध सभ्यता अँध्यारोतर्फ धकेल्न चाहन्छौं? महानगर त यसैमा लागिपरेको देखिन्छ।’
यो अभियानको विशेषता के भने, यसका अभियन्ता आ–आफ्नो विषयगत ज्ञान आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्।
जसरी आलोकले काष्ठमण्डप संरक्षण अभियानको अनुभव मिसाएका छन्, जसरी मोनालिसाले सम्पदा संरक्षणको महत्वबारे ज्ञान बाँड्छिन्, उसैगरी एक जना छन्, जो कानुनी परामर्शदाताको भूमिका खेल्छन्।
काठमाडौं स्कुल अफ लमा स्नातक चौथो वर्ष अध्ययनरत सञ्जय अधिकारी २१ वर्षका भए। उनी संरक्षण अभियान क्रममा सरकारी लेखापढी गर्न सघाउँछन्। छलफलमा बस्दा कानुनका दफा–उपदफा कोट्टयाउँछन्। र, अभियानका गतिविधिलाई कानुनी दृष्टिमा बलियो पार्ने काम गर्छन्।
उनी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा उल्लिखित प्रावधान समातेर पुरातत्व विभागदेखि महानगरसम्मलाई अँठ्याउँछन्। रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भएका कुनै पनि काम ‘विधिको शासन व्यवस्था’ अनुरुप नभएको उनको भनाइ छ।
‘कानुनले सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्छ, महानगर भने खुलेआम मिचेर रानीपोखरीमा डोजर चलाउँदैछ,’ उनले भने।
पुरातात्विक महत्वका सम्पदामाथिको यो ‘लुट’ रोक्ने अधिकारप्राप्त निकाय पुरातत्व विभाग हो। ऊ आफैं प्रस्ट नभएको र महानगरपालिकालाई पनि प्रस्ट पार्न नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसैले, संविधानको धारा नै मिचेर काम भइरहेको उनी बताउँछन्।
यी छ जना प्रतिनिधि मात्र हुन्। यस्ता सयौं अभियन्ता रानीपोखरी जोगाउन आवाज उठाउँदै छन्। तिनलाई आपसमा बाँध्ने काम सामाजिक सञ्जालले गरेको छ।
र, समन्वय गर्छन्, आलोक।
‘काष्ठमण्डप र रानीपोखरी संरक्षण अलग अभियान हुँदै होइनन्,’ उनले भने, ‘दुवै जनताका अभियान हुन्।’
‘दुवैको एउटै उद्देश्य छ, काठमाडौं सम्पदाको रक्षा।’
यहाँनिर, सम्पदा संरक्षणविद् मोनालिसाले काठमाडौं सम्पदासँग जोडिएको एउटा विशेषता बताइन्।
‘हाम्रा सम्पदा विश्वका अन्य मुलुकभन्दा फरक छन्। यी संग्रहालय सम्पदा होइनन्, जीवनशैलीसँग अभिन्न जोडिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी सम्पदासँगै बाँचिरहेका छौं। यसलाई हामी संग्रहालयमा सजाएर राख्दैनौं, जात्रा, पर्व र उत्सवमा प्रयोग गर्छौं।’
उनले बाजा सभ्यताको उदाहरण दिइन्– जुन संग्रहालयमा थन्किँदैनन्, पर्वमा घन्किन्छन्।
मूर्तिकलाको उदाहरण दिइन्– जुन पाँच सय वर्षदेखि दुरुस्तै उतार्ने ज्ञान र सीप हामीसँग छ।
र, पोखरी सभ्यताको उदाहरण दिइन्– जुन दुई हजार वर्षअघि किराँतकालमा सुरु भएर आज पनि हाम्रो पर्यावरण र कतिपय जात्रा, उत्सवसँग गाँसिएको छ।
‘हामी पुस्तौंदेखि सर्दै आएको यही ज्ञानसँग बाँचिरहेका छौं। यो नै हाम्रो सभ्यता हो,’ उनले भनिन्।
‘यो सम्पदा जोगाउन सकिएन भने, एकदिन रानीपोखरीजस्तै काठमाडौंका सबै सम्पदा हरियो पालले बारिएका हुनेछन्।’
र, भित्रको विनाश हामी पालको प्वालबाट चियाएर बस्ने छौं।
Previous रानीपोखरी पुनर्निर्माण रोक्छु, सम्पदा बिग्रन दिन्नः उपमेयर खड्गी
Next विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’विरुद्ध भारतीय दबावः नीति नै फेर्ने तयारी